Science – My Life Magazine
अमेरिकी कम्पनी माइक्रोसफ्टले आफ्नो विन्डोज सेभेन अपरेटिङ सिस्टमलाई विधिवत रुपमा अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि माइक्रोसफ्टले विन्डोज सेभेनका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पूर्ण सपोर्ट बन्द गर्दैछ । यसलाई माइक्रोसफ्टको जीवनको अन्त्य अर्थात्…
एन्ड्रोइड फोनको तुलनामा आइफोन १ सय ६७ गुणा…
एप्पलको आइफोनको प्रयोगकर्ताहरूका लागि दुखद् खबर छ । हालै प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार अन्य ब्राण्डका स्मार्टफोनहरूको तुलनामा आइफोन साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यधिक असुरक्षित भएको पाइएको छ । रिपोर्ट अनुसार एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको तुलनामा आइफोन ह्याक हुने…
आउँदो दशकको विज्ञान जगत : चन्द्रमामा पुनरागमनदेखि बुढ्यौली…
प्रविधि जगतमा पछिल्लो १० वर्षमा व्यापक परिवर्तन तथा विकास देख्न पाइयो । अबको दशक प्रविधि उद्योगका लागि कस्तो रहला ? आउँदो २०३० सम्ममा प्रविधिको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता आविष्कारहरु होलान् ? आजभन्दा दश वर्षअघि स्मार्टफोन बजारमा…
साइबर विज्ञहरुका अनुसार साइबर आक्रमणको सबैभन्दा प्रमुख कारण इन्टरनेट कमजोर पासवर्ड रहने गरेको छ । त्यसैले साइबर सुरक्षाका लागि अनलाइन अकाउन्टको पासवर्डहरु सुरक्षित तथा मजबूत हुनु आवश्यक छ । सेक्योरिटी सर्भिस कम्पनी स्प्लास डाटाले इन्टरनेट…
नेपालले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको भू-उपग्रह नेपाली स्याट–१ ले भुटान, बङ्गलादेशको ढाका तथा भारतका आसाम, दार्जिलिङ र सिक्किमका भूभागको तस्बिर लिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले आफ्नो कार्यालयमा सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम…
सोसल मिडिया साइट फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि एक नयाँ टूल लिएर आएको छ । उक्त नयाँ फिचरको सहयोगबाट फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोटो तथा भिडियो फेसबुकबाट गुगल फोटोजमा सार्न सक्नेछन् । फेसबुकले यो नयाँ फिचर आयरल्याण्डबाट सुरु गरेको…
निकट भविष्यमा नेपालले अन्तरिक्षमा पठाउने तयारी गरेको स्याटलाइटको नाम ‘सगरमाथा स्याट’ राखिने भएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको नाम स्वीकार्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आइटीयू) ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई त्यसको जानकारी गराएको हो । आइटीयूले अघिल्लो…